Salamo - Fifandraisana amin'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-02 mpandimby ny Magazine > Salamo - fifandraisana amin'Andriamanitra
Na misy salamo vitsivitsy mifandraika amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra, ny ankamaroan'ny salamo dia mamaritra ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Mety hisy hieritreritra hoe ny salamo dia tsy nieritreritra afa-tsy ny mpanoratra ary tsy voatery hanome toky ho an'ny hafa. Raha izany no izy dia tafiditra ao amin'ny boky fihirana ny Isiraely taloha mba hanasana antsika handray anjara amin'ny fifandraisana araka ny voalaza ao amin'ireny hira ireny ny salamo. Nasehon'izy ireo fa tsy nifandray tamin'ny olona manontolo fotsiny Andriamanitra, fa tamin'ny olona rehetra tao aminy koa. Afaka mandray anjara ny rehetra.
Mitaraina fa tsy takatry ny saina
Na izany aza, ny fifandraisana dia tsy nirindra foana araka izay nirinay. Ny endrika fitarainana mahazatra indrindra dia ny fitarainana - efa ho ny ampahatelon'ny salamo no niantefa tamin'Andriamanitra tamin'ny endrika fitomaniana. Nitantara olana iray ireo mpihira ary nangataka tamin’Andriamanitra mba hamahana izany. Matetika no nanitatra sy nampihetsi-po ilay salamo. Salamo 13,2Ohatra amin'izany ny -3: "Tompo ô, mandra-pahoviana no te hanadino ahy tanteraka Hianao?" Mandra-pahoviana no hanafina ny tavanao amiko? Mandra-pahoviana aho no tokony hanahy ato am-poko sy hatahotra ao am-poko isan'andro? Mandra-pahoviana no hitsangana hanohitra ahy ny fahavaloko?
Fantatra ireo tononkira satria matetika no tononina ny salamo. Na ireo tsy voakasik'izany manokana aza dia nangatahina mba hanatevin-daharana ny hira fitomaniana. Angamba hampahatsiahivana azy ireo fa misy ny sasany amin'ny olon'Andriamanitra izay nanao ratsy tokoa. Nanantena ny hidiran'Andriamanitra izy ireo, saingy tsy fantany hoe rahoviana no hitranga izany. Io koa dia mamaritra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ankehitriny. Na dia niditra an-tsehatra tamim-pahavitrihana aza Andriamanitra tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy handresy ireo fahavalontsika ratsy indrindra (ota sy fahafatesana), dia tsy miresaka haingana ny olantsika ara-batana araka izay tadiavintsika Izy. Mampahatsiahy antsika ny Fitomaniana fa mety maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny olana. Ka mitodika any amin'Andriamanitra foana isika ary manantena fa hamaha ny olana Izy.
Na ny salamo aza dia miampanga ny Andriamanitra matory:
“Mifohaza, mifohaza, hitsara ahy sy tariho ny adiko, Andriamanitro sy Tompoko! Tompo Andriamanitro ô, ampio aho hitsara ny fahamarinanao, mba tsy hifalian'izy ireo amiko. Aza avela hiteny ao am-pony izy hoe: Indro, iry! Naniry izany izahay. Aoka tsy hanao hoe: Efa lanintsika izy (Salamo 35,23- iray).
Tsy noeritreretin'ireo mpihira fa natory tao ambadiky ny dabilio Andriamanitra. Ny teny dia tsy natao hanehoana ny zava-misy. Aleon'izy ireo mamaritra ny toe-po mampihetsi-po manokana - amin'ity tranga ity dia ny fahasosorana. Ny boky fihirana nasionaly dia nanasa ny olona hianatra ity hira ity haneho ny halalin'ny fahatsapany. Na dia tsy nifanehatra tamin'ny fahavalo voalaza ao amin'ny Salamo aza izy ireo tamin'izany fotoana izany dia mety ho tonga ny andro. Noho izany, amin'ity hira ity, Andriamanitra dia mangataka famaliana: "Aoka ho menatra sy mangaihay izay mifaly amin'ny fahantrako; mitafy henatra sy fahafaham-baraka izay mirehareha amiko (and 26)".
Amin'ny toe-javatra sasany, ny teny hoe "mihoatra noho ny mahazatra" - mihoatra lavitra noho izay antenaintsika ho re any am-piangonana: "Aoka ho maizina ny masonao mba tsy hahita, ary hihetsiketsika ny andilanao. Fafao tsy ho eo amin’ny bokin’ny fiainana ireny, mba tsy ho voasoratry ny marina” (Salamo 69,24.29). Sambatra izay maka ny zanakao madinika ka manorotoro azy amin'ny vatolampy! ( Salamo 137,9)
Midika ara-bakiteny toy izany ve ireo mpihira? Mety nanao izany ny sasany. Fa misy fanazavana mazava kokoa: tokony ho fantatsika ho hyperbole ny fiteny tafahoatra - ho fanitarana ara-pientanam-po amin'ny alalàn'ny mpanao salamo ... Tian'Andriamanitra hahalala an'izay hamafin'ny fihetseham-pony amin'ny toe-javatra iray izy »(William Klein, Craig Blomberg, and Robert Hubbard, Fampidirana ny hevitry ny Baiboly, p. 285).
Feno fiteny mampihetsi-po ny salamo. Izany dia tokony hamporisika antsika hampiseho ny fihetseham-pontsika tena lalina eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary hametraka ny olana eo an-tanany.
Ny fitarainana sasany dia mifarana amin’ny fampanantenana fiderana sy fisaorana: “Hidera an’i Jehovah aho noho ny fahamarinany, ary hidera ny anaran’i Jehovah Avo Indrindra aho.” ( Salamo. 7,18).
Toy ny hoe manome fifanakalozana an’Andriamanitra ilay mpanoratra: Raha manampy ahy ianao dia hidera anao. Saingy raha ny tena izy dia efa midera an'Andriamanitra daholo ilay olona. Ny fangatahana fanampiana dia ny fanekena manambara fa afaka manatanteraka ny fangatahana Andriamanitra. Efa niandry azy hiditra an-tsehatra ny vahoaka raha misy vonjy maika ary manantena ny hivory indray hiatrika fotoam-bavaka amin'ny andro firavoravoana ho avy hisaotra sy hidera. Fantatr'izy ireo tsara ihany koa ny tonon-kira. Na ny mpijaly mafy aza dia asaina hianatra ny fisaorana sy fiderana fiderana, satria hisy fotoana eo amin'ny fiainana indray, satria ireo tononkira ireo koa dia maneho ny fihetseham-pony. Mamporisika antsika hidera an Andriamanitra na dia mampijaly antsika manokana aza izy io, satria ny mpikambana hafa ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika dia afaka miaina fotoam-pifaliana. Tsy misy fiantraikany amintsika fotsiny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra - fa momba ny maha-vahoakan'Andriamanitra. Rehefa faly ny olona iray dia faly daholo; rehefa mijaly ny olona iray, dia mijaly daholo isika. Ny Salamo alahelo sy salamo fifaliana dia mitovy amintsika. Na dia mahazo fitahiana maro aza isika, dia mitaraina fa kristiana maro no enjehina noho ny zavatra inoan'izy ireo. Ary izy ireo koa dia mihira fiderana mifaly, matoky fa hahita andro tsara kokoa amin'ny ho avy izy ireo.
Ny Salamo faha-18 dia ohatra iray amin’ny fisaorana noho ny famonjen’Andriamanitra tamin’ny loza. Ny andininy voalohany amin’ny Salamo dia manazava fa i Davida dia nihira ny teny ao amin’io Salamo io, “fony Jehovah nanafaka azy tamin’ny tanan’ny fahavalony rehetra”: Mitaraina amin’i Jehovah Tompon’ny fitahiana aho, ka hovonjena ho afaka amin’ny fahavaloko. Ny famatoran'ny fahafatesana nihodidina tamiko, ary ny riaka fandravana no nampahatahotra ahy. Ny famatoran'ny maty nihodidina tamiko, ary ny famatoran'ny fahafatesana nanarona ahy. Raha raiki-tahotra aho, dia niantso an'i Jehovah ... Nihorohoro sy nihorohoro ny tany, ary nihozongozona ny fanambanin'ny tendrombohitra ... Nisy setroka niakatra avy teo amin'ny orony, ary afo mandevona avy tamin'ny vavany; Nisy lelafo nipoitra avy taminy8,4- iray).
Indray mandeha i David dia nampiasa teny nifidy be loatra hanamafisana zavatra iray. Isaky ny voavonjy amin'ny loza maika isika - na vokatry ny mpanao an-keriny, mpifanila trano, biby na haintany - misaotra sy misaotra an'Andriamanitra izahay noho ny fanampiana rehetra omeny antsika.
Ny salamo fohy indrindra dia maneho ny foto-kevitra fototra momba ny fihirana: ny antso ho amin'ny fiderana arahin'ny fanazavana: Miderà an'i Jehovah, ry jentilisa rehetra! Miderà Azy, ry firenena rehetra; Fa manapaka antsika mandrakizay ny fahasoavany sy ny fahamarinany. Haleloia! ( Salamo 117,1-2)
Entanina ny vahoakan'Andriamanitra hampiditra ireo fahatsapana ireo ho ampahany amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra: fahatsapana hafahafa, fankasitrahana ary fiarovana. Momba ny vahoakan'Andriamanitra foana ve ny fahatsapana fiarovana? Tsia, ny fisaonana mampahatsiahy antsika fa tsy miraharaha isika. Ny tena mahagaga momba ny Bokin'ny Salamo dia ny fifangaroan'ireo karazana hira samihafa samy hafa. Midera ny fiderana, fisaorana ary fitarainana; izay taratry ny hoe miatrika izany rehetra izany ny vahoakan'Andriamanitra ary momba antsika Andriamanitra na aiza na aiza alehantsika.
Ny salamo sasany dia miresaka momba ny mpanjakan'ny Joda ary azo inoana fa nohiraina nandritra ny diabe ampahibemaso isan-taona. Ny sasany amin'ireo salamo ireo dia adika ankehitriny ho ny Mesia, satria ny salamo rehetra dia mahatanteraka an'i Jesosy. Amin'ny maha-olona azy dia niaina izy - toa antsika - ahiahy, tahotra, fahatsapana fa nilaozana, nefa koa finoana, fiderana ary fifaliana. Midera azy isika amin'ny maha Mpanjakantsika antsika, amin'ny alalany no namonjen'Andriamanitra famonjena ho antsika. Manentana ny saintsika ny salamo. Izy ireo dia manatanjaka antsika amin'ny alalàn'ny fifandraisantsika miaina miaraka amin'ny Tompo amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny olon'Andriamanitra.